Mogadishu Journal » 2019 » November » 10
Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in xayiraad lagu sameeyay maanta
Mjournal :-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay si ula kac ah maanta isku dayday in ay baajiso Safar maanta ay ku tageen Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa uu sheegay in saacado...
Mjournal :-Wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxaa ay u ambabaxeen dalka Fariinsiiska. Wafdiga oo Garoonka diyaaradaha ay kasii sagootiyeen Xildhibaano iyo Wasiiro ka tirsan dowladda ayaa waxaa ay ka...
Mjournal :-Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inay la xisbaatami doonaan Shirkadda leh diyaaraddii maanta ka degtay garoonka diyaaradaha Beledweyne, isagoo ku eedeeyay inay sameysay mas’uuliyad darro, ayna qaadatay riski sida uu yiri. Waare ayaa...
Mjournal :-Wararka aan ka heleyno magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in diyaaradii ay la socdeen Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif loo ogolaaday in ay kasoo degto magaalada Baladweyne. Diyaarada oo saakay ka duushay...
Mjournal :-Bangiga Ganacsiga ee Itoobiya oo magaciisa loo soo gaabiyo Ganacsiga CBE ayaa wada qorshe uu xarun ama laan uga furanayo magaalada Somaliland ee caasimada maamulka Somaliland. Guddoomiyaha Bangiga Ganacsiga CBE ee Itoobiya Mr.Bacha Gina, ayaa shaaca ka qaaday in meel...
Mjournal :-Guddoomiyihii Baarlamaanka Maamulka Puntland oo Xildhibaannada Maamulkaas ay sheegeen Khamiistii inay xilkii ka qaadeen ee Cabdi Xakiin Dhoobo-Daareed ayaa ka hadlay sababtii keentay in xildhibaannada sheegaan inay xilkii ka qaadeen. Waxaa uu sheegay in isaga uu...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka baaqday safaruu Maanta oo Axad uu ku tegi lahaa Magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan,halkaas oo uu fatahaad ka sameeyey Wabiga Shabeelle. Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in...